कृषि अनुदान सहकारीमार्फत दिने तयारी : अर्थमन्त्री
सरकारले कृषि क्षेत्रमा जाने अनुदान सहकारीमार्फत दिने तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन । यस्तो अनुदान व्यक्तिगत रूपमा प्रदान गर्दा दुरुपयोग भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषिमा मल, बिउविजन तथा प्रविधिमा दिइने अनुदान सहकारीमार्फत दिने गृहकार्य भइरहेको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा बिहीबारदेखि सुरु भएको सहकारी उद्यम प्रवद्र्धन राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै डा. खतिवडाले सहकारीमार्फत अनुदान जाँदा प्रभावकारी प्रयोग भई लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले रासायनिक मल, यन्त्र उपकरण, शीतभण्डार वा अन्य प्रशोधनका लागि दिइने अनुदान सहकारीको माध्यमबाट जानुपर्ने र आधुनिकीकरणसहितको कृषि उद्यममा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।